အောင်ဇော်| September 1, 2012 | Hits:5,528
| | သမ္မတဦး သိန်းစိန်က အစိုးရအတွင်းမှာ ၀န်ကြီးအပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ချိန်မှာ ပြည်တွင်းပြည်ပ လေ့လာသူတွေ သုံးသပ်တာကတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား (Reformist) တွေကို ရှေ့တန်းကို ပို့တယ်၊ သမ္မတရုံးမှာ နေရာပေးတယ်၊ နောက်ပြန်ဆွဲသူတွေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို နှောင့်နှေးအောင် တားဆီးနေသူတွေကို အရေးမကြီးတဲ့ နေရာတွေပို့တယ်၊ ဒါကြောင့် သမ္မတအနေနဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ဖော်ဆောင်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ လုပ်နိုင်အောင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မယ် ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါကြီးဖိုး September 2, 2012 - 12:35 am ကချင်စစ်ပွဲဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကြီးမားဆုံးအဟန့်အတားဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီစစ်ပွဲကို ကြိုးကိုင်နေသူတွေဟာ ရည်တွက်မယ်ဆိုရင် လက်ငါးချောင်းတောင် ပြည့်မယ်မထင်ပါ။ ဒီလူတွေဟာ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို တားဆီးနေသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရနှင့်အတူ အတိုက်အခံအင်အားစုအားလုံးနှင့် ပြည်သူတရပ်လုံးက ကချင်စစ်ပွဲရပ်စဲရေးကို တိုင်းပြည်ရဲ့ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ ညီညီညွတ်ညွတ် အမြန်ချမှတ် လုပ်ဆောင်ရန် သင့်ပါတယ်။
Reply kyawkyawlwin December 31, 2012 - 9:47 am ကချင်စစ်ကိုကြိုးကိုင်နေတယ်ဆိုတာ စစ်ရပ်နိုင်ဖို့လား စစ်ဆက်တိုက်နိုင်ဖို့လား။
Reply aye aung September 2, 2012 - 10:35 am good ko aung zaw.that is true.
Reply ဘုရင် September 3, 2012 - 11:47 am ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ အားကောင်းနေပေမယ့် နောက်ကလိုက်တဲ့သူတွေလဲ အားကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ အားလုံးမှာ တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ် တကယ်စေတနာထားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ စေတနာထားသူတွေများလာမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေ အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်လာမှာသေချာပါတယ်။
Reply အာဃာတ September 3, 2012 - 2:20 pm ၀န်ကြီးတွေထဲက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လိုလားသူတွေအများအပြား ထွက်ပေါ်လာတာဟာ အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုစရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
Reply SoeNaing September 4, 2012 - 12:09 am I like arrawaddy news.
Reply tawwinyahtar September 6, 2012 - 10:07 pm စလယ်ဝင်ဖင်မမဲခင်မကွဲအောင်ဝိုင်းဝန်းထိမ်းသိမ်းကြပါရန်
Reply kyawkyawlwin October 27, 2012 - 5:03 pm ပြုပြင်ပြောင်းလည်းရေးသမားတွေက ဘယ်သူတွေလည်းလို့ မတွေ့ ရသေးဘူးဗျာ။ နိုင်ငံရေးသမား နိုင်ငံရေးကစားသူနဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်စားသူတွေကတော. မြန်မာ ကိုပြောင်းကြမယ်မထင်ဘူး
Reply kyawkyawlwin December 31, 2012 - 10:05 am ဦးသိန်းစိန်ရဲ့တနေ့က တတိယအဆင့်ပြုပြင်ပြောင်းလည်းရေးနဲံ့ပတ်သက်တဲ့မိန့်ခွန်းထဲက တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးရဲ့ ဂုဏ်သိက်ခါ အတွက်သတိပေးတဲ့ စကားကို နာလိုခံခက်ဖြစ်ကြ မယ့်သူတွေက ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ကြသလည်းဆိုတာ အတော်အရေးကြီးသလို